Filoha sy Praiminisitra Mifampiandry an-kendritohana ?
Fomba fiasan’ny depiote Alemana Mangarahara tsara, hoy ny Freedom
Nitatitra tamin’ny haino aman-jery ny dian’ny birao mpitantana ny antoko Freedom tany Alemaina sy Frantsa tetsy amin’ny Villa Pradon Antanimena omaly ireo delegasionin’ity antoko ity tany an-toerana.
Mpanao politika Malagasy Mivelona amin’ny famadihana palitao
Isaky ny misy tolo-dalàna na volavolan-dalàna holaniana eny anivon’ny parlemantera dia tsy maintsy heno hatrany ny resaka malety tato anatin’ny 4 taona izay. Iny aloha efa tsy zava-baovao intsony.
Dr Jules Andriamaholison “Ravao any io governemanta io”
Ravana io governemanta io satria izay no antoka voalohany hahazoana fifidianana madio, hoy ny Dr Jules Andriamaholison.
Didier Ratsiraka Hanao fanambarana goavana amin’ny sabotsy
Feno 42 taona katroka ny 16 martsa lasa teo ny Antoko Arema naorin’ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka. Ny 16 martsa 1976 mantsy no niorenan’ity antoko anisan’ny manana ny tanjany eto Madagasikara ity. Miarahaba ny filoha mpanorina,
Jeune TIM Antehiroka Manohana ara-tsakafo ny mpianatra
Tranga iray miseho amin’ny fokontany iray eny Antehiroka, distrika Ambohidratrimo dia miverina hariva ny mpianatra amin’ny sekoly ambaratonga fototra ao, rehefa talata sy alakamisy.
Lalàm-pifidianana Rava ny tsena, hahemotra ny fandinihana
Andinin-dalàna 87 tamin'ireo 247 voasoratra tao anatin’ilay volavolan-dalàna no nasiam-panovana ka ny 50 nahitsy ary ny 37 nofoanana. Raha tamin’ny 10 ora maraina ny fotoana nomena tamin’ny voalohany dia tamin’ny 12 ora sy sasany vao nanomboka ny fotoana omaly teny Tsimbazaza;
Depiote vehivavy Mapar Nikotaba teny Tsimbazaza
Tamin’ny 10 ora maraina no fotoana nomena an’ireo depiote fa hirosoana amin’ny fandinihana an’ilay volavolan-dalàna fehizoro 05/2018 mikasika ny lalàm-pifidianana 2018 ao anatin’ny fivoriana nitambaram-be omaly talata 20 martsa 2018.
Milaza azy ho tsy miady tsy miady ny fitondrana ankehitriny, saingy tsikaritra fa efa mifanipaka sy samy manao izay saim-patany.
Re fa toa samy manana ny ekipany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, izay tsy nety voailika teo amin’ny toerany na dia efa ela aza no nandeha ny resaka fa hoesorina izy. Vao mainka aza toa niha nahazo faka sy mamahatra ao anaty fitondrana na dia efa nalaza ratsy ho mpiray tsikombakomba amin-dRamatoa Claudine Razaimamonjy aza. Tsy sahin’ny filoham-pirenena kosa anefa ny manala azy mivantana noho ny efa fananany olona miara-dia aminy ao anatin’ny governemanta, izay efa nalaza ratsy fa tokony horoahina tsy ho minisitra noho ny resaka afera, saingy mbola tafajanona ao miaraka amin’ny praiminisitra, ary miray hina sy miray saina ny tsy hanaiky lembenana hiala tsotra eo anivon’ny fitondrana. Voalaza fa manana ny olony ny praiminisitra, ary manana ireo mitapikitra sy miezaka mijoro ho namana mahatoky azy ihany koa i Hery Rajaonarimampianina, ka tsy sahy mifampikitikitika, hany ka samy manao izay danin’ny kibony sy tsy mifampijabaka fotsiny satria samy manana ny aferany, ary samy matahotra mafy ny hipoahan’ny afera malotony avy. Tsy atao mahagaga raha tsy misy mety mivoaka ny marina amina resaka afera maro, toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy satria mifampiandry kendritohana ny an-daniny sy ny an-kilany, ka raha vao mipoaka ny aferan’ny iray, dia hanapoaka sy hamaky bantsilana ny an’ny iray ihany koa, ka aleo samy mamgina sy mifampihatsaravelatsihy
Filohana andrim-panjakana mampiahiahy
Tsy mbola hay ihany koa izay tena kajin’ireo filohan’ny Antenimiera 2 tonta, izay tsikaritra ho efa te ho lohany. Tsy tena olon’ny HVM rahateo izy ireo fa samy nanana ny foto-kevitra sy antoko politikany no tonga akaiky ny HVM, izay mety ho resaka tombotsoa no naharoboka azy, ka rehefa hita fa tena tsy misy antenaina intsony amin’ny fitondrana dia tsy ho sarotra ho azy ireo ny hikopak’elatra sy hitady famaharana amin’ny hafa. Tafiditra ao anatin’ireo mpanao poltika sokajian’ny mpanara-baovao ho isan’ireo tsy mpitaingina soavaly maty izy ireo, ka any amin’izay mahatolotolotra ihany no mamahatra. Mafampana ny raharaha, toy ny resaka fitsipaham-pitokisana eny amin’ny antenimieram-pirenena, ka solombavambahoaka hatrany amin’ny 75 no voalaza fa efa vonona sy miombon-kevitra amin’ny fitsipahana an’i Solonandrasana Mahafaly Olivier sy ny ekipany. Ho hita eo izay mety ho tohiny.